रेल आउँछ–आउँछ, आउँदैन ! · Aawaj Nepal
आवाज नेपाल, २०७६ साउन ६ सोमबार
जनकपुर—जयनगर—कुर्था रेल सञ्चालनका लागि एक वर्ष्भित्र चार पटक बेग्लाबेग्लै मिति घोषणा भइसक्यो। तर रेल आउने छाँटकाट अझै छैन। जयनगरदेखि कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटर रेलमार्ग बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएपछि अन्योल बढेको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतमात्रै
यसरी आकासियाे सुनकाे मुल्य, एकै दिनमा यति धेरै बढ्याे
कोरोना संक्रमित वास्तबमा नै घटेका हुन त ?
ग्रामीण सडकको मुख्य कारण मुलुकभर बाढीपहिरोको अत्यधिक जोखिम